2018 May | PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL May 2018 – Page 8 – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
FAAHFAAHIN: Maxaa ka soo baxay Kulan kale oo markale dhexmaray Odayaasha Laascaanood & Xubnaha ka soo jeeda G Sool ee katirsan Somaliland?
May 22nd, 2018 · 5 Comments
LAASCAANO(P-TIMES) – Markale guuldarro ayuu ku dhamaaday shir dhexmaray Odayaasha dhaqanka ee magaalada Laascaanood & Wasiiro katirsan maamulka Hargeysa oo kasoo jeeda gobalka Sool, waxaana kulankas uu ka dambeeyey markii ay shalay shir jaraa’id qabteen Odayaasha dhaqanka ee magaaladu. Caaqil Salaad Caaqil Xuseen oo kamid ah waxgaradka magaalada Laascaano ayaa si adag ula hadlay Wasiirka Horumarinta...
DEG DEG+AKHRISO: Somaliland oo doonaysa in ay xirto Odayaal ugu baaqay in ay ciidamadooda kala baxdo SOOL & Xiisad ka taagan
May 22nd, 2018 · 1 Comment
LAASCAANO(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya magaalada Laascaano ee xarunta gobalka Sool ayaa sheegaya in ciidamo ka soo jeeda Somaliland oo ka tagay Gambara ay gaareen magaaladaas, kuwaas oo ujeedadooda lagu sheegay xoojinta xaaladda Ammaanka ee magaalada, ka dib markii ay Odayaasha dhaqanku ku dhawaaqeen in aysan dooneyn Somaliland, ayna ciidamadeeda kala baxdo deegaanada gobalka Sool. Wararku waxay...
AKHRISO: Dawladda PL oo amaro culus ku soo rogtay gaadiidka u safra inta u dhaxaysa Garoowe & Jiidaha dagaalka iyo amaro kale.
May 22nd, 2018 · 2 Comments
GAROOWE(P-TIMES)- Kulan gaar ah oo ay yeesheen Guddiga Difaaca ee dawladda Puntland ayaa laga soo saaray afar go`aan oo khuseeya inta badan gaadiidka u kala goosha magaalada Garoowe & deegaanada ku dhaw dhaw degaanka Tukaraq oo ay ka socdaan dagaalo u dhaxeeya Puntland & Somaliland. Gudoomiyaha guddiga Difaaca ee dawladda Puntland ahna Wasiirka Amniga Cabdullaahi Dowlad ayaa soo saaray go`aamada...
DAAWO: Waxgaradka & Cuqaasha G Sool oo markale si toos ah fariin ugu diray Muuse Biixi, kuna amray in uu ciidamadiisa kala baxo Sool.
LAASCAANO(P-TIMES)- Odayaasha iyo Waxgaradka Beesha Dhulbahante ayaa shir jaraa’id oo ay ku qabteen magaalada Laascaanood waxay markale ugu baaqeen in uu maleeshiyaadkiisa kala baxo gobalka Sool, Madaxweynaha Soomaliland Muuse Biixi Cabdi oo ay ku eedeeyeen in uu doonayo in uu gubo gobalkaas. Odayaashan oo u badan beeshii horey taageerada ugu heysay Somaliland ee Jaamac Siyaad ayaa cadeeyey mawqifkooda,...
WARAR CUSUB: Wararkii ugu dambeeyey ee jiidaha dagaalka ka cusub maanta iyo Puntland oo joojisay dhamaan…
TUKARAQ(P-TIMES)- Saacadihii ugu dambeeyey dhiilada colaadeed ee kataagan deegaanada ay isku horfadhiyaan ciidamada Difaaca Puntland iyo kuwa maamulka la baxay Somaliland ayaa sii kordhayey, waxaana la xaqiijiyey in ay shalayba dhinacyadu aad iskugu dhawaadeen. Rasaasta iyo madaafiicda ay isku ridaan dhinacyadu ayaa ah mid maalin kasta dhacda, waxaana mararka qaarkood hubka la ridayo awgiis dadku moodaan...
XOG: Taliska ciidamada Somaliland ee G Sool kusugan oo welwelkii ugu badnaa soo wajahay & Xogo soo baxaya.
LAASCAANO(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in welwelkii ugu badnaa uu hadda soo wajahay ciidamada maamulka Somaliland ee kusugan jiidaha dagaalka ee gobalka Sool, taas oo ka dhalatay markii Odayaasha iyo waxgaradka gobalkaas ee horey u taageeri jiray Somaliland ay hadda muujiyeen sidda ay garabkooda uga baxeen maamulkaas oo ay mudo dheer xulufo ahaayeen. Taliyaha ciidamada Somaliland...
DAAWASHO XASAASI AH: Mid kamid ah Beelihii horey loogu eedeynayay in ay SL ku hayaan G Sool oo garabkooda ka baxday, kuna dhawaaqday?
May 21st, 2018 · 10 Comments
LAASCAANO(P-TIMES)- Labo maalin ka hor Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu si toos ah u baahiyey xogta cadeynaysa in ay Odayaasha iyo Waxgaradka Beesha Jaamac Siyaad ee Dhulbahante oo horey loogu eedeynayay in ay saameynta ugu badan ee joogitaanka gobalka Sool ee maamulka Somaliland ay leedahay ay ka baxayso maamulkaas, kuna dhawaaqi doonto warcad. Odayaasha iyo Waxgaradka guud ee beesha ayaa si rasmi...
FAAHFAAHIN: Maxaa ka soo baxay kulamo xasaasi ah oo ka dhacay Aqalka Madaxtooyada Puntland, kuna wajahnaa Xaaladda Dagaalka?
GAROOWE(P-TIMES)- Madaxweynaha Puntland ahna Taliyaha guud ee ciidamada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa saacadihii ugu dambeeyey kulamo xasaasi ah la lahaa guddiyada qaabilsan dagaalka ay soo qaaday Somaliland. Madaxweynaha Puntland wuxuu xalay la kulmay guddiyadda dagaalka qaabilsanaa, gaar ahaana guddiga Difaaca iyo Guddiga Taakuleynta ciidamada oo uu si gaar ah ugala hadlay arrimaha socda. Saxaafadda...
DEG DEG: M/weynaha Khaatumo oo kudhawaaqay in ay PL kula midoobeen dagaalka G Sool
May 21st, 2018 · 8 Comments
Madaxweynaha maamulka Khaatumo State oo shir kuqabtay magaalada Garoowe ayaa kudhawaaqay in ay dawladda Puntland kula midoobeen sidii maamulka Somaliland looga saari lahaa gobalada Sool, Sanaag iyo Cayn, ayna hadda diyaar u yihiin xoreynta gobaladdaas. Madaxweynaha ayaa sheegay in ficilada kooxda Muuse Biixi ay yihiin kuwa looga gol leeyahay in lagu xijo xaabiyo shacabka gobaladda SSC. Xubintan ayaa...
XOG: Baaqyada ku wajahan Joojinta Colaadda G Sool ee ka imaanaya DF, QM, US,Culumada & Siyaasiinta Soomaalida mabaajin karaan dagaal dhaca?
May 21st, 2018 · 3 Comments
MUQDISHO(P-TIMES)- Todobaadkii lasoo dhaafay markale ayay dagaal isku qaadeen maamulada Puntland & Somaliland, kaas oo ka dhacay deegaanka Tukaraq ee gobalka Sool, wuxuuna geystay khasaare badan oo kala gaaray labada dhianc ee dagaalamayey. Baaqyo caalami ah iyo kuwa gobalka ayaa laga soo saaray dagaalkan, waxaana si kulul u cambaareeyey Qaramada Midowbay, Dawladda Mareykanka, Dawladda Faderaalka,...
DEG DEG+XOG: Kulan u socday Madaxda Somaliland ee kasoo jeeda Sool & Odayaasha dhaqanka ee Laascaano oo guuldarro iyo gacan ka hadal kusoo dhamaaday..
May 21st, 2018 · 7 Comments
LAASCAANO(P-TIMES) – Warsidaha Puntlandtimes wuxuu ogaaday in uu shalay subaxnimadii abaare 9-kii aroornimo ka furmay Hotelka Xamdi ee magaalada Laascaanood kulan gaar ah oo u dhaxeeyey Odayaasha dhaqanka ee Beesha Dhulbahante iyo xubnaha ugu jira maamulka Somaliland oo uu horkacayo gudoomiyaha baarlamaanka Baashe Maxamed Faarax (Feer-Macaansade), ayna ku jiraan Wasiirka Horumarinta Biyaha, Ina...
DEG DEG: Saxaafadda Garoowe oo looga yeeray kulan deg deg ah, Maxaase looga hadli doonaa?
GAROOWE(P-TMES)- Sidda ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya magaalada Garoowe ee caasumada Puntland kulan deg deg ah ayaa loogu yeeray wariyaasha ka shaqeeya mPuntland, gaar ahaana magaalada Garoowe, kas oo ka dhacaya xarunta wasaaradda Warfaafinta ee dawladda Puntland. Inkastoo oo aan la ogeyn ajendaha shirka, haddana warar ku dhaw dhaw Wasaaradda Warfaafinta ayaa sheegaya in looga wada hadli doono...
DAAWO+MAGACYO: Somaliland oo Aas Qaran u sameysay Taliyaashii ugu sareeyey ee ay ku weyday dagaalkii ay la gashay ciidan kamid ah PL.
HARGEYSA(P-TIMES)- Somaliland ayaa bilowday in ay Aas Qaran oo ay Saxaafaddu joogto u sameyso inta badan Jeneraaladii iyo Korneyladii dagaalka ee ay ku weyday dagaalkii ay la gashay unugyo katirsan ciidamada Difaaca Puntland 15-kii bishan, kaas oo ka dhacay deegaanka Tukaraq ee gobalka Sool. Madaxii Howlgalinta ciidamada Badda ee Somaliland Col, Cawaale Axmed Galaal oo isaga iyo guuto uu watay aysan...
WARAR CUSUB: Saaka & Jiidaha dagaalka ee ay isku horfadhiyaan PL iyo SL, maxaase ka cusub?
TUKARAQ(P-TIMES)- Lixdii maalmood ee lasoo dhaafay daganaansho aan cago badan ku taagneyn mararka qaarkoodna la maqlayo rasaas iyo hubka culus oo ay is weydaarsanayaan ciidamada Puntland & Somaliland ayaa ka jira deegaanka Tukaraq iyo deegaanada ku dhaw-dhaw oo ay 15-kii bishan ku dagaalameen ciidamada labadaas maamul. Daganaanshahan kooban waxaa ku hoos socda diyaar garow ay labada dhinacba wadaan,...
WARARKII ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya Jiidaha Dagaalka Tukaraq, Maxaase scoda saacadihii ugu dambeeyey?
May 20th, 2018 · 3 Comments
TUKARAQ(P-TIMES) – Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya Jiidaha dagaalka ee gobalka Sool oo ay isku horfadhiyaan ciidamada maamulada Puntland & Somaliland ayaa sheegaya in cabsi laga qabo in uu qarxo saacadaha nagu soo aadan dagaalkii ugu cuslaa oo dhexmara labada dhinac ee kudagaalamaya deegaanadaas. Ciidamadii ugu badnaa oo ka kala tirsan labada maamul ayaa gaarayey saacadihii ugu dambeeyey,...
AKHRISO+XOG: Ciidamada Difaaca PL oo fashiliyey qorshe ay doonayeen ciidamada SL ee Tukaraq kusugan & Dhaawacyo la geeyey Caynaba?
May 20th, 2018 · 5 Comments
TUKARAQ(P-TIMES) – Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya deegaanada ay isku hor fadhiyaan ciidamada Difaaca ee dawladda Puntland & maleeshiyaadka Somaliland ayaa sheegaya in la maqlayey duhurnimadii ilaa aroornimadii hore ee saaka hubka iyo rasaas goos-goos ah oo ay is weydaarsanayaan ciidamadu, taas oo ka dambeysay markii ay cutubyada madaafiicda ee ciidamada Puntland madaafiic ku garaaceen...
AKHRISO: Somaliland oo ku dhawaaqday dagaal ay ku difaacayso Xaduudaheeda, si adagna uga hadashay Xaaladda Tukaraq
May 20th, 2018 · 8 Comments
HARGEYSA(P-TIMES) – Shir deg deg ah oo ay yeesheen xubnaha Golaha Wasiirada ee maamulka Somaliland, kaas oo xalay ku qabsoomay magaalada Hargeysa ayaa looga hadlay arrimaha ku saabsan dagaalada ka aloosan gobalka Sool, gaar ahaana u dhaxeeya Puntland & Somaliland. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo shir gudoomiyey kulankan ayaa aad uga hadlay xaaladda dagaalka, wuxuuna ku celiyey mar...
Ciidamada Difaaca PL oo weerar ku qaday Wasiirka gaashaandhiga S/LAND & Wararkii u dambeeyey
May 20th, 2018 · 11 Comments
BADHAN(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya magaalada Hadaaftimo ee gobalka Sanaag ayaa sheegaya in ay ciidamada Puntland ka hortageen wafdi kasocday Somaliland oo uu hogaaminayey wasiirka gaashaandiga ee maamulkaas oo ka soo jeeda gobalka Sanaag, isla markaasna isku dayay in uu gudaha u galo magaaladaas si dhuumasho ah. Rasaas xoog leh ayay isku weydaarsadeen gudaha magaalada Hadaaftimo, waxayna muujiyeen...
Xiisad ka taagan magaalada Laascaano, kulamo lagu kala kacay & mid kamid ah Beelaha ugu badan G Sool oo kudhawaaqaysa.
May 20th, 2018 · 7 Comments
LAASCAANO(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya magaalada Laascaano ee xarunta gobalka Sool ayaa sheegaya in mid kamid ah Beelaha Dhulbahante ee sidda weyn ula safnaa maamulka Somaliland ay maanta ku dhawaaqi doonaan go’aan lama filaan ku noqon doona maamulka Hargeysa, ka dib markii ay saacadihii ugu dambeeyey wax badan isbedeleen. Wararku waxay sheegayaan in Odayaasha & Cuqaasha waxgaradka beesha...
DEG DEG: Wararkii ugu dambeeyey oo naga soo gaaraya Jiidaha dagaalka ee G Sool & Xog laga helayo.
May 20th, 2018 · 9 Comments
TUKARAQ(P-TIMES) – Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya jiidaha dagaal ee ay isku horfadhiyaan ciidamada Puntland & Somaliland ayaa sheegaya in cabsi weyn laga qabo dagaal toos ah oo ka dhex bilowda labada dhinac, gaar ahaana markii ay ciidamadu aad iskugu dhawaadeen. Rasaas goos-goos ah iyo madaafiicda goobta oo ay dhinacyadu isku ridayaan ayaa laga maqlay jiidahan subaxnimadii hore ee...